MADAGASIKARA : Tompondakan’i Afrika amin’ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:05
Notokanana omaly ny Kianja ao Ambohidratrimo.
Accueil/Songadim-baovao/Fanatanjahan-tena/MADAGASIKARA : Tompondakan’i Afrika amin’ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena
MADAGASIKARA : Tompondakan’i Afrika amin’ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena
Notokanan’ny Filoha Andry Rajoelina omaly 10 jona 2021 ny kianja manarapenitra ho an’ny distrikan’Ambohidratrimo, 4 andro taorian’ny nitokanany ny kianja manarapenitra tao amin’ny Kaominina Mahitsy. Manaraka ny Fenitra Iraisampirenena takin’ny CAF sy ny FIFA ny kianja ary afaka mandray ny lalao Iraisampirenena.
Lucien R. 11 juin 2021
Firenena voalohany mahavita nanamboatra kianja filalaovam-baolina betsaka indrindra aty Afrika i Madagasikara, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, omaly, nandritra ny fitokanana ny Kianja manarapenitra vaovao ao Ambohidratrimo. Izany dia mametraka an’i Madagasikara ho tompon-dakan’ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanatanjahantena aty Afrika noho ny ezaka nataon’ny Fitondram-panjakana sy ny Filoham-pirenena. Samy miaraka manaiky izany ezaka goavana amin’ny sehatry ny fanatanjahantena ataon’i Madagasikara izany ireo minisitry ny fanatanjahantena ao Afrika, araka ny fanazavana.
Ho an’ny Kianja ao Ambohidratrimo manokana dia fantatra fa fanatanterahana ny veliranon’ny Filoha tamin’ny vahoaka tao an-toerana sy ireo tanora maro be ny 17 desambra 2018 ny fanamboarana ny kianja manarapenitra. Midika ny fanatrarana ny velirano faha 13-n’ny Filoha ihany koa ny fametrahana ny fotodrafitrasa izay mifantoka amin’ny fanandratana avo ny fanatanjahantena sy ny atleta malagasy. Vita ny kianja amin’izao fotoana izao ary ho tantanin’ny Ministeran’ny fanatanjahantena, ny Governoram-paritra Analamanga sy ny Kaominina Ambohidratrimo.
Nanafatra ny Barea
Nifanindran-dalana ny fitokanana ny Kianja sy ny fampivondronana ireo ekipam-pirenena Barea tao Ambohidratrimo. Nandritra izany, nanome fankaherezana manokana ireo mpilalao ny Filoha. « Andrasan’ny vahoaka malagasy ary hanova ny tantaran’i Madagasikara ny hahatafiakatra ny ekipa malagasy amin’ny dingan’ny fifantenana hiatrehana ny Tompon-daka maneran-tany eo amin’ny sehatry ny baolina kitra », hoy ny Filoha. Manohana ny ekipa hatrany ny Fanjakana amin’ny maha rehareha sy ny fanandratana avo ny hambom-pom-pirenena ny ezaka nataon’ny Barea.
Fangatahan’ny Ben’ny tanàna
Nandritra ny fotoana omaly koa no namalian’ny Filoha Andry Rajoelina ny fangatahan’ny Ben’ny tanànan’Ambohidratrimo amin’ny hananganana CSBII manarapenitra miaraka amin’ny radiologie numérique, efitrano fianarana manarapenitra sy Tsena manarapenitra ao ao an-toerana. Hanampy izany ny fanamboarana ny lalana voie rapide mirefy 5 km miainga ao amin’ny Kaominina Andriantany hatrany Anosiala. Horavahana jiro ihany koa ny sisin-dalana amin’io lalana io, araka ny toromariky ny Filoha. Mbola hisy ny fivoriana ho tarihin’ny Filoha miaraka amin’ny Ben’ny Tanana handinihina ny asa eny ifotony. Mahafantatra ny filàna eny amin’ny kaominina ny Filoha noho izy efa Ben’ny Tanana.
Taorian’ny fanaovana hazalambo : Maty voatifitry ny zandary i Del Kely mpaka an-keriny ikoizana
MAJAORO JENERALY SY FANETSEHANA ARA-MIARAMILA Nandray ny andraikiny ny Amiraly Assanaly Bemarivo sy Jly Andriamasimanana william
FAHALALAHAN’NY ASA FANAOVAN-GAZETY : Inian’ny mpisehatra sasany tsy resahina ny nametrahana ny Lalàna lf 2020-006
MARC RAVALOMANANA: Tsy tsara toerana hanome lesona momba ny Demokrasia